Vivo Z3: iimpawu, iphepha lobugcisa kunye nexabiso | I-Androidsis
IVivo Z3 isemthethweni: amanqaku, iinkcukacha kunye nexabiso
Indlu yamaTshayina, iVivo, inesiphelo esitsha esilungele ukuthengiswa. Imalunga nayo I-Vivo Z3, phakathi kuluhlu oluza nezimbini zeetshipsi zamva nje zeQualcomm, i-Snapdragon 670 kunye ne-710.
Esi sixhobo iza neempawu ezintle kunye neenkcukacha zobuchwephesha, apho kungagqithisi kuphela iiprosesa ezinazo njengentliziyo yayo, kodwa uyilo kunye nezinye iimpawu esiza kuthi sandise ngazo ngezantsi.
IVivo Z3 inesibheno seprimiyamu. Iza neepaneli zeglasi ngaphambili nangasemva kunye nesakhelo sesinyithi embindini esongeza indawo yokuthintela ukubonakala kwayo. Imilinganiselo ye-smartphone yi-155.97 x 75.63 x 8.1 mm, ke ngoko izindlu ze-6.3-intshi IPS LCD isikrini esinotshi Umgxobhozo wamanzi, exhasa isisombululo se-FullHD + se-2.340 x 1.080 pixels kunye ne-slim kunye ne-19: 9 ratio ratio I-smartphone ibonelela ngendawo yescreen se-90.3% kubulelwe kwi-bezels zayo ezincinci.
El I-Vivo Z1 yazisa i-chipset ye-Snapdragon 660. Umlandeli wayo ifike ngeendlela ezimbini ze-CPU. Imodeli esisiseko yeempawu zeVivo Z3 Snapdragon 670, ngelixa okwahluka kwayo kuphezulu kuqhutywa yi-chipset Snapdragon 710. Iza ne-4 kunye ne-6 GB ye-RAM kunye nokugcinwa okwakhelweyo ngaphakathi kwe-64 kunye ne-128 GB. Ukugcina okongeziweyo kukho isixhobo seMicroSD kwisixhobo.
Inkqubo yokusebenza I-Android 8.1 Oreo OS enencasa ngeFunTouch OS 4.5 iyafumaneka kwangaphambili efakwe kwiVivo Z3. Umenzi waseTshayina ubandakanye umncedisi weJovi AI kwifowuni. Ukusebenza ngokugqibeleleyo, iVivo Z3 ixhotyiswe nge-Dual-Turbo injini Ibalekisa ukusebenza kwesixhobo ngelixa ufikelela kusetyenziso lwenkqubo kunye nemidlalo, ke ifowuni ithembisa ngamava emidlalo agudileyo njengoko iza nemowudi yomdlalo ezinikeleyo nge-DND. Ezinye izinto ezinxulumene nomdlalo ezikhoyo kwi-smartphone ziMowudi yomfanekiso-mfanekiso, ikhibhodi yomdlalo, kunye nomdlalo we-4D.
Ngokuphathelele ukufota, I-Vivo Z3 ine-16-megapixel kunye ne-2-megapixel ekrelekrele enekhamera ene-AI. Inotshi yasemanzini igcina ikhamera yeselfie yesisombululo se-12-megapixel.
Inkqubo yonke yokufota Ipakishwe yimifanekiso yokufota esekwe kubukrelekrelenjengokufunyanwa kwemeko, iifoto ze-bokeh, kunye nokufota okukhanya kancinci. Ubukho bekhamera ye-IR ephetheyo, ivumela ifowuni ukuba ixhase ukuvulwa kobuso nakwimeko eziphantsi zokukhanya. Ukongeza koku, ixhotyiswe ngeskena sokuprinta iminwe esingasemva.
IVivo Z3 ifumana amandla okusebenza ukusuka kwifayile ye- 3.315 mAh ibhetri yamandla edityaniswa nobuchwephesha bokutshaja kweemoto ezimbini. Iimpawu zonxibelelwano ezifumanekayo kwi-Z3 ziyahambelana ne-SIM ezimbini, i-Wi-Fi 802.11 ac, iBluetooth 5.0, i-microUSB, i-GPS kunye ne-3.5mm jack yomsindo.
1 Iphepha lobugcisa
2 Ixabiso leVivo Z3 kunye nomhla wokukhutshwa
ISIKHUMBUZO 6.3 "FullHD + IPS LCD 2.340 x 1.080p (19: 9) Waterdrop
INKQUBO ISpapdragon 670 / Snapdragon 710
i-RAM 4 okanye 6 GB
ISIKHUMBUZO SANGAPHAKATHI 64 okanye 128 GB
IINKCUKACHA Ngaphambili: I-16 kunye ne-2 MP ene-AI / Ngasemva: MP eyi-12 ene-AI
IBATTERI I-3.315 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
INKQUBO YOKWENZA I-Android 8.1 Oreo phantsi kweFunTouch OS 4.5
IIMPAWU ZE-OTRAS Umfundi ongasemva weminwe. 3.5 mm jack. ImicroUSB
Ixabiso leVivo Z3 kunye nomhla wokukhutshwa
IVivo Z3 ngoku iyafumaneka ukuthengiswa kwangaphambili e-China kwaye ziya kufumaneka ukuthengwa ukusuka ngo-00: 00 nge-1 kaNovemba. Ifowuni inokusetyenziswa kwimibala eyahlukeneyo enjengeenkwenkwezi zobusuku obuMnyama, iDayi epinki, kunye neAurora Blue. Ezi zimbini zokugqibela ziinguqulelo zombala wegradient. Ukusukela kumhla wopapasho, akukho siqinisekiso ngokufumaneka kweVivo Z3 kwilizwe liphela. Nazi iindidi ezintathu zeVivo Z3 kunye nexabiso lazo:
IVivo Z3 ene-Snapdragon 670, i-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina - 1.598 yuan (~ 200 euros).
IVivo Z3 ene-Snapdragon 710, i-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina - 1.898 yuan (~ 237 euros).
IVivo Z3 ene-Snapdragon 710, i-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina - 2.298 yuan (~ 288 euros).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IVivo Z3 isemthethweni: amanqaku, iinkcukacha kunye nexabiso
Ungakhumbula njani ngalo lonke ixesha apho simise khona ngeemephu zikaGoogle
I-Lenovo K5 Pro kunye nee-K5 zisemthethweni: amanqaku, iinkcukacha kunye namaxabiso